Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO naga soo gaadhay ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalada ka socda gudaha wadanka Ogadenia, waxayna ka xoogwarantay khasaraha soo gaadhay ciidanka gumaysiga Itoobiya. Dagaalada oo qaarkood sida ka muuqata warbixinta aan faahfaahin laga helin ayaa cadawga lagaga dilay askar darajooyin kala duwan lahaa waxayna u dhaceen dagaalada sidan.
1/4/14 Misiga oo Dudumocadka katirsan dagaal CWXO iyo kuwa cadawga ku dhex maray waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 3 askari tiro aan lafaahfaahinina waa lagaga dhaawacay.
2/4/14 Dooxadabaka oo dagmada Awaare ee Gobolka Jarar katirsan weerar gaadma ah oo ay CWXO kuqaadeen kolonyo baabuur ah oo ay ciidamada gumaysigu wateen waxay ka gubeen 1 baabuur oo kuwa dagaalka ah oo isaga iyo wixii saaraaba ay isla basbeeleen.
12/4/14 Laanmadooyalay oo Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
14/4/14 Xeronaagood oo dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay ka tirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan oo naf iyo maalba leh.
15/4/14 Huubaale oo dagmada Galaalshe ee Gobolka Nogob katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 4 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/4/14 Dagmada Dhuxun ee Gobolka Nogob dagaal kadhacay waxaa ciidamada naflacaariga ah ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
17/4/14 Garaslay oo dagmada Dhuxun ee Gobolka Nogob katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 4 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
25/4/14 Moqor oo Dagmada Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
25/4/14 Birqod weerar habeenina ah oo ay CWXO ku qaadeen ciidamada gumaysiga waxaa ciidanka JWXO usuurta gashay in ay lawareegaan guud ahaan xeradii ciidanka waxaana ciidanka cadawga soo gaadhay khasaare naf iyo maalba leh oo aan wali lafaahfaahinin. Dhanka kale waxay CWXO gubeen 1 baabuur oo kuwa dagaalka ah oo gurmad ugu socday ciidamada cadawga.